Hlala uzolile kwiNkosana yonke eneLawn yaBucala
I-15 nje yeekhilomitha ukusuka eBhubaneswar, entliziyweni ye-Cuttack, I-cottage yangasese ezolileyo egcinwe kwi-CDA, iya kuba yinkcazo efanelekileyo. Ikhaya elihle kwibala lekona ekupheleni kwendlela liziva nje lonwabile. Ngendawo yonke kuwe, indawo yokupaka yabucala, ejikelezwe yingca enkulu, uhlaza ngaphakathi nangaphandle kukuhlala ekhaya kude nekhaya. Ngetempile yeShiva ngasemva kwakho, imvakalelo ingcwele, ngakumbi ngeeyure ze-Aarti.
Ngengca ekufutshane nawe, hlala ngaphandle okanye ulale ngaphakathi, uhlala ungaphakathi kohlaza oluchumileyo unyaka wonke. Ngazo zonke izinto eziyimfuneko, zilungele nje ukubaleka ngempelaveki okanye udibane nabahlobo bakho. Kutheni uhlala ehotele ngelixa uhlala eKHAYA?
Ikhaya lisemva kwetempile yenkosi uShiva. Indawo ezolileyo, eneekhefi ezinjengeBiggies kunye neLa Cafeotheque ekufutshane kakhulu kwipropathi. Iintshukumo azicocekanga kwaye zinoxolo, kodwa zonke izinto eziyimfuneko zikumgama ohambahambayo njengeevenkile zamayeza, iivenkile zegrosari, iivenkile ezinkulu, iivenkile zokutyela, iikhefi, njl.
Ndihlala kumgama oziikhilomitha ezi-2 kuphela. Umnxeba okanye isicatshulwa, ndiya kuba kwinkonzo yakho phakathi kwemizuzu. Kwakhona, ikhamera yokhuseleko ibekwe ngaphandle kwekhaya ukuqinisekisa ukhuseleko lwakho ukuba kuyimfuneko. Kukwakho nesikhululo saMapolisa kumgama omde wekhilomitha. Indawo ikhuselekile etyeni.
Ndihlala kumgama oziikhilomitha ezi-2 kuphela. Umnxeba okanye isicatshulwa, ndiya kuba kwinkonzo yakho phakathi kwemizuzu. Kwakhona, ikhamera yokhuseleko ibekwe ngaphandle kwekhaya…